Ibsa Kongirasii Biyyooleeysa Oromoo Irraa Kenname. Jun 23/2021 | OROMSIIS OROMO
Filannoon KFOn keessaa dhiibamee ba’eefi guutummaa uummata Itoophiyaa bakka hinbuune kun, shakkii keenya mirkaneessuurraa kana hafe, iyya komii paartilee filaannoo keechatti hirmaatanii dhaga’uun danda’amaeera. Adeemsi filannichaa walii gala, miira uummataa kan hinhawwanne waan ta’eef, gadi fageenyaan yoo ilaalamemmoo, fedhii paartii taayitaarra jiruu waan hinguutneef galmeen filattootaa yeroo sadii dheerateera. Akkuma Boordiin Filannoo mataansaa amanetti, beekamtii boordichaatiin alatti buufataaleen filannoo 79 hundeeffamanii aragamaniiru. Naannolee filannoo dhibbootaan lakkaayaman keessatti filannoon tasumaa hindeemsifamne.
Naannoolee akka Oromiyaa, aanaalee dhibbootaan lakkaayaman keechatti diraamicha bareechuuf paartiin taayitaarra jiru ofii isaa waliin dorgomeera. Sababa waraanaatiin Tigiraayi keechatti guutummaatti filannoon hinturre. Walii galatti harka 100 keechaa shantamni filannoon ala jechuun ni danda’ama. Oolee bulee adeemsa bu’aa-ba’ii kanaan miidhaa mudatu tilmaamuuf nama paartii ta’uu hinbarbaachisu.